တယ်လီနော Open Mind - မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အလမ်းများ ကို မြှင့်တင်ပေးသွားမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အစီအစဉ် | Telenor Myanmar
တယ်လီနော Open Mind - မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အလမ်းများ ကို မြှင့်တင်ပေးသွားမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အစီအစဉ်
20 January, 2020 - Yangon
တယ်လီနော၏ Open Mind အစီအစဉ်သည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အတွေ့ အကြုံကောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေမည်ဖြစ်
တယ်လီနော၏ အခြားသော စျေးကွက်များတွင် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်ကြာမှ ရရှိလာသည့် အတွေ့ အကြုံများအပေါ် အခြေခံကာ တယ်လီနောမြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (MILI) နှင့် ပူးပေါင်းကာ Open Mind အစီအစဉ်ကို စတင်သွားမည်ဖြစ်
။ မတူကွဲပြားမှုနှင့် အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုအပေါ် ခိုင်မာသည့် ရည်သန်မှု၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် တယ်လီနောမြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (MILI) နှင့် ပူးပေါင်းကာ တယ်လီနော Open Mind အစီအစဉ်ကို ယနေ့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် ရွေးချယ်ခံရသူများကို သင့်လျော်သည့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့ကျင့်မှုမှတဆင့် ယင်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးသွားမည့် အခွင့်အလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးသွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
တယ်လီနော Open Mind အစီအစဉ်သည် တမူထူးခြားသည့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ် ပြီး မသန်စွမ်းသူများ (PwDs) များအတွက် အထောက်အကူပြု နည်းစနစ်များနှင့် နည်းပညာများမှတဆင့် မြှင့်တင်ပံ့ပိုးပေးသွားမည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အချို့သော ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူများ၊ အကြားအာရုံ သို့မဟုတ် အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းသူများအပြင် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသူများ ပါဝင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူများထဲမှ ရွေးချယ်ခံရသူများအနေဖြင့် သင့်လျော်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လေ့ကျင့်မှု များမှတဆင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
“မတူကွဲပြားပြီး အားလုံးပါဝင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရယ် အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံး ပိုမိုနီးစပ်စေမယ့် သိမြင်နားလည်မှုတွေကို ရရှိဖို့ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ တယ်လီနောက ယုံကြည်ပါတယ်။ တယ်လီနော အနေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေအားလုံး သူတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးနေတာကြောင့် လူ့အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ ယနေ့မြင်တွေ့၊ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်ပံ့ပိုးပေးမှုတွေ ဟာ အဖွဲ့အစည်း (တယ်လီနော) အပေါ် သိသိသာသာ ထင်ဟပ်မြင်သာလာစေပါတယ်။ ဒီ Open Mind အစီ အစဉ်လေးကတော့ တယ်လီနောရဲ့ တခြားစျေးကွက်တွေမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်း စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (MILI) နဲ့အတူ ဒီလိုထူးခြားကောင်းမွန် တဲ့ အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လို့ အင်မတန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်” ဟု တယ်လီနော မြန်မာ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူ Selina Lomholdt မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တယ်လီနော Open Mind အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့် ရွေးချယ်ခံရသူ (၃) ဦးအား လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးဖြစ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနနှင့် ကော်ပရိတ်ရေးရာ ဌာနတို့တွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအဖြစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးနှင့် ကြိုဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် နှစ်လတာ (လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်မှုနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ) လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ဆယ်လတာ လုပ်ငန်းခွင် လေ့လာရေးအစီအစဉ်ဟူ၍ နှစ်ပိုင်း ပါဝင်သည်။
“တယ်လီနောလို ကုမ္ပဏီကြီးက မသန်စွမ်းသူတွေအတွက် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အလမ်း ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် တကယ်ကို ထူးခြားပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပြီး တယ်လီနောမြန်မာက Open Mind အစီအစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံးရွေးချယ်ခံရသူတစ်ဦးဖြစ်လို့လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်လိုမျိုးပဲ မြန်မာနိုင်ငံက အခြားကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကလည်း ကျွန်တော်တို့လို မသန်စွမ်းတွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုဖန်တီးပေးလာနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု Open Mind အစီအစဉ်အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုမျိုးမင်းထက်မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တယ်လီနောမြန်မာသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပန်းတိုင်များ (Sustainable Development Goals - SDG) ၏ ပန်းတိုင် (၁၀) ပေါ် အဓိကထားကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် ရည်ရွယ်တီထွင်ထားသည့် ဖြေရှင်းချက်များမှတဆင့် မတူညီမျှမှုများကို လျှော့ချသွားနိုင်ရန် ရည်သန်ထားသည်။ တယ်လီနောမြန်မာသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးမှုစသည့် နယ်ပယ်များတွင် သက်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည်ဖော်၊ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လတ်တလော ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်များတွင် Plan International နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၊ ဘေးကင်းသည့် အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုနှင့် ကျင်လည်မှု စီမံကိန်းအပြင် ယူနီဆက်ဖ်မြန်မာနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်သည့် မိုဘိုင်းနည်းပညာအသုံးပြု၍ မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုမှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းခြင်း (MBDR) စီမံချက်တို့ ပါဝင်သည်။
Open Mind အစီအစဉ်အကြောင်း
တယ်လီနော Open Mind အစီအစဉ်သည် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူများနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ ကို ရင်ဆိုင်နေရသူများအတွက် စီမံရေးဆွဲထားသည့် တမူထူးခြားသော အတတ်သင်၊ လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောနော်ဝေတွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မသန်စွမ်းသူများ ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖန်တီးခဲ့သည့် တယ်လီနော Open Mind အစီအစဉ်သည် ယခု အချိန်တွင် ဆွီဒင်၊ ဘူဂေးရီးယားနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ များတွင် ဖြန့်ကြက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ မှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ နော်ဝေနိုင်ငံတွင် Open Mind အစီအစဉ်သည် ဥရောပမဟုတ်သည့်နိုင်ငံများမှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိအောင် ကူညီပေးသည့် ထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ဖော်ဆောင်လုပ်ဆောင် လျက်ရှိသည်။
တယ်လီနောမြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း၌ သင့်တင့်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်သည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ် ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ပေးပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ တယ်လီနောမြန်မာသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံ တွင်း အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော ကွန်ရက်မှတဆင့် သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံကောင်းများအား တာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝရှိသည့် ကတိကဝတ်ဖြင့် သုံးစွဲသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အားလုံးရှိ အသုံးပြုသူပေါင်း ၂၁ သန်းကျော်ထံသို့ ၎င်း၏ ကွန်ရက်များဖြင့် လွှမ်းခြုံကာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ တယ်လီနောမြန်မာအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.telenor.com. တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
တယ်လီနောမြန်မာ၏ မိခင်လုပ်ငန်းစုဖြစ်သော တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မိုဘိုင်း အော်ပရေတာများ အနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူပေါင်း ၁၈၃ သန်းကျော်အား ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှတဆင့် လူ့အသိုက်အဝန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ကြာ တယ်လီနော၏ အဓိက ဦးစားပေးမှုဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် နော့ဒစ်ဒေသနှင့် အာရှဒေသတစ်လွှား အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ တယ်လီနော လုပ်ငန်းစုအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.telenor.com. တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်သည်။